Waxaan si fiican u tijaabinay Xiaomi Mi Band 1s | Androidsis
Waxaan si fiican u tijaabinay Xiaomi Mi Band 1s
Francisco Ruiz | | Reviews, Xiaomi
Dib-u-eegidan cusub ee aaladaha Android, ama xaaladdan Qalabka loo adeegsado nidaamka hawlgalka Android, waxaan si fiican u tijaabinay Xiaomi Mi Band 1s inaan kuu sharaxo, sida ku cad waaya-aragnimadayda shaqsiyadeed, wax kasta oo jijimadan cusub ee shaqsiyeed ee la socota ku dhisan dareeraha garaaca wadnaha, iska caabbinta biyaha iyo boodhka iyo batteriga soconaya iyada oo aan wax dhibaato ah laga qabin wax ka badan hal bil istaandarka, iyo in aan ku heli karno kaliya 29,99 doolarka Mareykanka, ama wixii isku mid ku yimaada isbeddelka hadda jira, in kabadan 28 Euro.
Cusbooneysiinta ugu weyn ee tan ay ka mid tahay cusub Xiaomi Mi Band 1s Marka loo eego qaabkii hore, waa hubaal inay tahay dareemayaasha garaaca wadnaha ee dareenka leh, Dareemayaal kaliya 30 ilbiriqsi gudahood ayaa garaacaya garaaca daqiiqad walba qalbigeena wuxuuna ku kaydin doonaa taariikh dhameystiran oo ku saabsan arjiga Android ee jijimadani leedahay waana lagama maarmaan in laga soo dejiyo Play Store laftiisa Google iswaafajinta. iyo lammaanaha isku mid ah.
1 Faahfaahinta farsamada ee Xiaomi Mi Band 1s
2 Dhamaan shaqooyinka Xiaomi Mi Band 1s
3 Fikirkeyga shaqsiyeed
Faahfaahinta farsamada ee Xiaomi Mi Band 1s
Tusaale Kooxdayda 1s
Nidaamka hawlgalka Iskiis
Qalabka dhismaha Daawaha Aluminium-magnesium ee madaxa iyo silikoon antiallergic ee jijimooyinka la isku beddeli karo
Xuduudaha kala duwan Bluetooth 4.0 oo shaqeynaya Android 4.4 iyo ka sareeya iyo macruufka 7.0 iyo ka sareeya
Noocyada kale IP67 shahaado la xaqiijiyay iyo dareeraha u adkaysta biyaha iyo culeyska culeyska
Qiyaasaha madaxa 37 x 13'6 x 9'9 milimitir
Miisaanka madaxa 5 garaam
Miisaanka deji Gram 14
Batariga 45 mAh oo lithium polymer ah oo bishii nagu siiya istaag
Qiimaha 29.99 $ - qiyaastii 28 euro heerka sarifka hadda.
Dhamaan shaqooyinka Xiaomi Mi Band 1s
Marka laga reebo awoodda qaado garaaca wadnaha ugu yaraan 30 ilbiriqsi qalbigeenna ka dibna ku kaydin natiijooyinka si otomaatig ah mahadnaqa codsiga Xiaomi Mi Fit, jijimadan shaqsiyadeed ee shakhsiyadeed, waxay na siisaa waxyaabo xiiso leh sida kuwa aan hoos ku qori doono:
Qaado garaaca wadnahayaga oo ku kaydi taariikhda daruurta mahadnaqa koontadayada Xiaomi, xisaab muhiim u ah in la awoodo in la isbarbar dhigo oo la bilaabo raaxaysiga Xiaomi Mi Band 1s.
Peedomer ama miiska tallaabada iyada oo suurtagal ah in la calaamadiyo hadaf maalinle ah marka lagu daro xogta lagu keydinayo taariikhda koontadayada Xiaomi.
Mitirka hurdada iyo tayadiisa. Xogta sidoo kale waxaa lagu keydiyaa taariikhdeena daruuraha.
Qaylodhaanta smart taasi oo kugu toosi doonta waqtiga saxda ah si hurdada ka kacdu u noqoto mid naxdin leh intii suurtogal ah.
Ogeysiinta saddexda nalka cad iyo nalka LED-yada ee codsiyadayadii hore loo soo xulay ee ka yimid barnaamijka Mi Fit.
Ogeysiinta by LEDS iyo gariirka wicitaanada soo socda.
Aragtideyda shaqsiyadeed ee ku saabsan jijimadan la dhaqmi karo ama jireed ma noqon karto mid wanaagsan., iyo ka saarida shaqeynta dareemaheeda garaaca wadnaha, taas oo ah shaqeynta ugu fiican ee aan ka heli karo Xiaomi Mi Band 1s, mitirkeeda tayada oo dhameystiran iyo qeylo dhaantiisa caqliga badan ayaa igu dhameeyay si aad u badan oo aan seexdo. habeen kasta oo jijimadu saaran tahay si aad u aragto natiijooyinka subaxa dambe oo aad ugu kaydiso taariikhdayda daruuraha.
Marka la soo koobo a qalab quantizer dareen leh noocyo aad u sarreeya qiimo run ahaan aniga ila muuqda marka la gaadho ficil ahaan dhaqaalayaasha oo dhan aad bay u badan tahay oo waxay noqon kartaa mid ka mid ah aaladaha tikniyoolajiyadeed ee ugu iibinta fiican xilligan, iyo xitaa intaa ka sii badan haddii aan u malayno in ciidaha Kirismaska ​​ay durba hareeraha ka xigaan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Xiaomi » Waxaan si fiican u tijaabinay Xiaomi Mi Band 1s
33 faallooyin, ka tag taada
Way ka fiican tahay inaad dhigto MI BAND PULSE, oo ah magaca rasmiga ah, sax?
Ku jawaab phluisma
Magaca rasmiga ah waa Xiaomi Mi Band 1s.
Juan A. Perez Garcia dijo
Waxaan kuu sheegayaa, markii aad ka shakisan tahay inaad khibrad u leedahay mawduuca ... "qoorta" waa sax, waa in la isticmaalo kooxda 1S oo leh qalab isku dhejisan, halkii laga isticmaali lahaa jijimadda, waxaan kaa codsan doonaa inaad tilmaamto, maxaa yeelay way qaadan doontaa cabirrada si ka duwan sidii hore ....
Jawaab Juan A. Pérez García
Waad ku mahadsantahay saaxiib qoraalkaaga.
dhul bisad dijo
Miyaad hubisay kalsoonida mitirka garaaca wadnaha adoo isbarbardhigaya suunka xabadka sida Polar ama wax la mid ah?
Mitiradahan nalka ayaa sumcad ku leh qalad iyo khalad ku ah cabirradooda gaar ahaan marka la jimicsanayo waxaana jira kala duwanaansho la taaban karo.
Ku jawaab CatLand
Waa mitir la isku halleyn karo tan iyo markii aan toos ula barbardhigay Tensiometer-ka kuwa kaa qaadaya garaaca wadnahaaga kaas oo ku bararaya gacanta mana jirto wax farqi ah oo u dhexeeya labadaas, ugu badnaan.
Polarka aad ii sheegto ayaa hubaal in uu waxtar badan u leeyahay ciyaartoyda laakiin sidoo kale aad ayuu uga qaalisan yahay 28kan Euro.
Faco Javier Ferruses (@Fer Javier) dijo
Waa maxay falanqaynta murugada leh. Tayada ayaa la mid ah tii hore? Ugu dambeyntii arjiga ma Isbaanish baa?
Jawaab Fco Javier Ferruses (@ferruses)
Fco Javier, hadaad arki laheyd fiidiyaha waad ogaan laheyd in arjiga aan adeegsado, oo ku saleysan asalka iyo kan ka yimid mania HTC, si buuxda loogu tarjumay Isbaanish.
Subax wanaagsan Francisco. Waxaan helay jijimadaydii shalay waxaanan isku dayay inaan rakibo abka sidaad adigu u rakibtay oo kale, oo leh hab socod iwm iyo jid majiraan.
Ma i caawin kartaa? Way fiicnaan laheyd.
halkee ka iibsan kartaa 1-da? maxaa yeelay ma heli karo meel ay ku iibiyaan, wax walba waa iib ka hor
Xagee ka iibsatay ama xagee ku iibiyaan? Miyey kugu kacday € 25? halkee ku taal
Miyuu qiyaasaa garaaca wadnaha si otomaatig ah mise waa inaad ka codsataa?
Haddii aad ku muujiso fiidiyowga weli ma aanan awoodin inaan arko, waana ka cudurdaaranayaa.
Waa inaad ku boorrisaa inuu ka sameeyo barnaamijka mobilada, shaqada kaliya ee adeegsata soo noqnoqoshada si otomaatig ah waa mitirka hurdada.
Subax wanaagsan. Maantana iibiyuhu wuu ii jawaabay. Waxay sheegaysaa in garaaca wadnahaagu uu kaliya si joogto ah u cabiro 22:00 pm ilaa 1 saac ka dib markaad toosto. Waxaan u baahanahay inaan ka jawaabo haddii cabirradan, oo uu sameeyo 2-dii daqiiqaba, markaa lagu arki karo arjiga, sida Fitbit Charge HR. Waxa aanan fahmin waa sababta aan si joogto ah loogu cabbiriin maalinta maadaama batterigu sii socon doono inuu sii dheeraado ama ka dheeraado Charge HR. Waxaan u maleynayaa in horumarintani ay ku imaan doonto cusbooneysiinta qalabka. Saxnaanta cabirka marka la barbar dhigo Apple Watch waa mid aad u sax ah, laakiin maahan jimicsi dalbanaya. Haddii aysan ku darin 24-saac cabbir joogto ah, waxaan u maleynayaa inay noqon doonto meel aad u daciif ah oo lagu soo jiito iibsadayaasha. Gacan-labaad waxaad ku heli kartaa Charge HR qiyaastii 80 euro oo waad xaqiijineysaa shaqadan. Hadda waxaan u maleynayaa in tallaabada xigta ay noqon doonto Mi Band leh shaashad yar oo monochrome ah oo aan wax badan u dhimin nolosha batteriga. Waxaan ku qanacsanahay in la sii deyn doono bilo yar gudahood ... waa isbedelka macquul ah.
Xidhiidh kasta oo lagu iibsado?
Qoorta sidoo kale waa la gelin karaa maadaama ay jiraan silsilado qoorta ah.
Waad salaaman tahay, ma loo baahan yahay inay ku xirnaato bluetooth si joogto ah si loo siiyo akhriska garaaca wadnaha?
Miyaad nooga tagi kartaa isku xirka si aad ula soo degsato arjiga Isbaanishka oo leh garaaca garaaca wadnaha?
Fiidiyowga waxaad ku leedahay waxaad ka soo degsataa htcmania laakiin ma heli karo.
Miyuu leeyahay GPS ay ku shaqeyso? Waxaan ula jeedaa inaan ku xisaabiyo waqtiga jiirada iyo kuwa kale….
Ku jawaab laura
Ma laha GPS, waxay isticmaashaa qalab lagu cabbiro masaafada. Xoogaa in yar oo leh mitirka garaaca wadnaha iyada oo la tixgelinayo in ay tahay jijin horeba loogu iibsan karo qadar ku dhow € 30. 😉
Cesc Freixas dijo
Miyaad ka tagi kartaa isku xidhka arjiga?
Jawaab Cesc Freixas
Waad salaaman tihiin. Websaydhka aad kugula talinayso inaad iibsato jijin, Geekbuying, ma lagu kalsoon yahay? Waxaan ka helay jijin sidoo kale Amazon laakiin qiimahiisu waa € 50 mana fahmin kala duwanaanshaha qiimaha. Mahad badan. Salaan.
Ku jawaab Paula
Waxaan isticmaalaa arjiga Xiaomi Mi Fit laakiin kuma heli karo si aan u duubo garaaca wadnahayga cd.Waxaan ku weydiyaa arjiga ... Ma aqaano inay noqon doonto maxaa yeelay waxaan ku qaadaa Samsung S3 oo wata Android 4.3 ... inkasta oo inta kale ay yihiin yutiilitida.
Waad salaaman tahay… ami m isla wax… ma ku guuleysatay inaad xaliso ?? ?? ..for km dheh sidee ??… mahad… salaan
Isla waxaas ayaa igu dhacay aniga sidoo kale, waxaan soo degsaday dhowr codsi oo kala duwan mana aanan ku guuleysan inaan helo midkoodna si aan u qoro heerka garaaca wadnahayga, fekerkeyga waxaan u maleynayaa inuu leeyahay astaamo aad u tiro badan qiimaha uu haysto ...
Kaliya waa inaad ka soo degsataa rasmiga rasmiga ah 'Mi Fit App Google Play Store'.
JOHN Carlos GB dijo
Haye, dhibaato ayaan qabaa, waxaan badalay moobilkeyga hadana Xiaomi Mi4c jijimadu ilama eka (waa inaad iska fuushaa inaad ka timid isla astaanta). Waxay ii soo baxday in iyadoo BQ aquaris E4 ay ii dhigantay, laakiin waxaan dhib ku qabay in qalabka garaaca wadnaha uusan muuqan maadaama shaashadda 4,5 ”ay muuqatay. Marka, wixii talo bixin ah ???
Jawaab JUAN Carlos GB
Xk ma cabbiro garaaca wadnaha wax walbana waa hagaagsan yihiin
Waxaan heystaa usbuuc, si fiican ayey u shaqeysaa laakiin barnaamijka dukaanka iphone lama yimaado mitirka garaaca wadnaha, qof ayaa garanaya sida loogu helo android hadii ay jirto wado laakiin macruufka weli ma aqaano sida loo caawiyo !! !
http://www.htcmania.com/showthread.php?t=1129483 (goobtaas waxaa ku yaal macluumaad iyo qaab loogu isticmaalo dareeraha wadnaha si ka wanaagsan)
Ku jawaab Kevlpzz
Waxaan hayaa la iibsaday oo shaqaynaya. In kasta oo ay run tahay inay tahay jijin 30 euro ah oo haddaan barbar dhigno Fitbit ama Garmin HR, way lumaysaa, qiimahaas waa midka ugu fiican ee aad ku heli karto dharka noocan ah.
Hagaag, waxay umuuqataa in Xiaomi ay hada sii deynayaan nooc cusub oo jijimadan ah, Xiaomi Mi Band 2, oo xoogaa horumar ah iyo shaashad isku dhafan oo LCD ah. Haddii ay noocyadan aysan fiicnayn qiimaha ay leeyihiin ...
Ku jawaab dharka cusub ee la beddeli karo
Snapchat iyo raadinta qaaciidooyinka cusub sida kan ugu dambeeya: "Story Explorer"
[APK] Bender, Fry iyo Leela ayaa kugu sugaya Futurama: Game of Drones